I-Twitter: Ukulandela ngokuzenzekelayo ngokusekwe kwindawo | Martech Zone
I-Twitter: Ukulandela ngokuzenzekelayo ngokusekwe kwindawo
NgeCawa, uDisemba 29, 2013 NgeCawa, uDisemba 29, 2013 Douglas Karr
Ukuba zombini noluntu kunye nonxibelelwano phakathi, amashishini anokusebenzisa Twitter Ukukhulisa ukuthengisa kwabo basekhaya- kulula kunokuba abaninzi becinga. Abasebenzisi be-Twitter bayasebenza kwaye bayacacisa ukuba bakuphi kwaye benza ntoni. Ngokulandela abasebenzisi be-Twitter abasebenza kwingingqi, iinkampani ezixhomekeke kwishishini lendawo zinokunyusa ukugcwala kwazo ngokuthe ngqo kunye nokwandisa uphawu lwazo kwi-intanethi.
Realtors, iivenkile zalapha, imivalo, iiklabhu, iiarhente zeinshurensi… okanye naliphi na elinye ishishini eliqhuba ishishini ngokusekwe kwindawo ekuyo linokuxhamla ngokulandela kunye nasekuphuhliseni ubudlelwane nabasebenzisi beTwitter malunga neshishini labo. Isibonelelo esongeziweyo kukuba aba bantu bahlala babelana ngeefoto, iividiyo kunye nohlaziyo- hayi kwi-Twitter kuphela, kodwa nakwezinye iinethiwekhi zentlalo kunye nokusetyenziswa.
Tweet Adder uya kufumana abasebenzisi be-twitter ngendawo ngaphakathi kwe-10 yeemayile, i-25 yeemayile, i-50 yeemayile, okanye i-100 yeekhilomitha zayo nayiphi na ikhowudi ye-zip, ukungenisa, ukuthumela okulandelayo kuyalandela. Tweet Adder ifumene ukuba ukuya kuthi ga Ama-56% aya kukulandela umva -Ukubonelela ngethuba lokuba baqale ubudlelwane bakho benethiwekhi. Kananjalo, banokuqala ukuphendula kwaye baphinde baphinde babuyele kuhlaziyo lwakho!
Ukubhengezwa: Yiyo ikhonkco lokudibana!
tags: ngokuzenzekelayoumgamageolocationi radiusIsongezelelo se-tweetkwiifayileTwitterngaphakathi komgama